Vaovao - Famaritana ny nitroimidazoles efatra sy ny residezan'ny metabolita ao amin'ny sakafon'ny biby - spectrometry masom-borona chromatography-tandem
Fandehanan-draharaha momba ny fiarovana ny sakafo
Thermo Scientific Life Science MS dia tsy vitan'ny hoe manana fomban-drazana lava amin'ny teknolojia fa mbola manohy manavao ihany koa. Ny famakafakana faobe Quadrupole an'ny hyperboloid tena conjugate izay mifanentana amin'ny sehatry ny herinaratra teôorika tonga lafatra amin'ny boky dia ampiasaina amin'ny spektrometrika marobe tratra quadrupole TSQ®. Hatramin'ny nandefasana ny spectromètran'ny MS / MS (TSQ®) triple quadrupole voalohany eran-tany tamin'ny 1980, ny spectromètre quadrupole triple TSQ® telo dia be mpampiasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fambolena, ny quarantine, ny fiarovana ny sakafo, sns. fanandramana santionany amin'ny vokatra betsaka, vokatra fiompiana sy akoho amam-borona, vokatra vita amin'ny ronono ary sakafo voadinika mifandraika amin'izany, toy ny residu amin'ny famonoana bibikely, ny residues ny zava-mahadomelina, mycotoxins, additives, Supplement Nutritional and polutants organika Ary tetikasa hafa hanampy anao hihaona amin'ny fitakiana fitantanana miha henjana hatrany.
Ny 5-nitroimidazoles dia kilasin'ny zava-mahadomelina misy firafitry ny peratra 5-nitroimidazole, izay misy hetsika fanoherana ny protozoal sy ny bakteria. Ny fitsapana isan'andro dia misy santionany azo avy amin'ny biby toy ny biby fiompy, vokatra anaty rano, vokatra tantely ary vokatra ronono. Ity lahatsoratra ity dia manondro ny SN / T 1928-2007, GB / T 21318-2007, GB / T 22949-2008, GB / T 21995-2008, Minisiteran'ny Fambolena 1025 Fanambarana-22-2008, Minisiteran'ny Fambolena No. 1486 Fanambarana- 4-2010, SN / T 2579-2010, notsorina tamin'ny GB / T 23410-2009, GB / T 23407-2009, GB / T 23406-2009, dia fomba fampitaovana haingana ny fitadiavana ireo residu zava-mahadomelina nitroimidazole isan-karazany, fomba mahazatra ao anatiny Quantitative.
Ho an'ny fitaovana reagent mifandraika amin'izany, ny fanaingoana mahazatra sy ny tahiry, ary ny fomba fanomanana santionany, azafady jereo ireo fenitra voalaza etsy ambony. Ho an'ny fomba fampitaovana mifandraika amin'izany, azafady mba jereo ity antontan-taratasy ity. (TSQ Triple Quadrupole Mass Spectrometer Manual Manual - Fitsapana momba ny fiarovana ny sakafo)
Ny rafitra TSQ Triple Quadrupole LC / MS dia manana rafitra fantsom-panafody avo lenta.
Toetran'ny dingana misy rano
Toetran'ny spectrometry marobe
Chromatogram mahazatra (sombintsombiny avy amin'ny fanazavana fanampiny ao amin'ny GB / T 23410-2009)
Anisan'ireo fomba fitiliam-pirenena ambony etsy ambony, ny fatran'ny zava-mahadomelina nitrofuran amin'ny matrices samihafa dia 1.0-5.0 μg / kg. Ny fomba dia afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny fenitra momba ny lalàna anatiny sy iraisam-pirenena momba ny fahatsapana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fomba fitantanana mahazatra.